SADC Yoodzwa Moyo neNhaurirano dzeHurumende yeMubatanidzwa
Chivabvu 18, 2010
Musangano pakati pevatungamiri vatatu vari muhurumende yemubatanidzwa, uyo wange uchifanirwa kuitwa svondo rino, kuitira kuti ugadzirise zviri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa, wambosendekwa zvakare parutivi nekuda kwekuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kumusangano weG15 kuIran.
VaMugabe, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vange vachifanirwa kusangana kuti vakurukure nezvegwaro ravakapihwa nevaitungamira nhaurirano vakamirira mapato avo.
Nyaya dzasara dziri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa dzinosanganisira kusagadzwa kwaVaRoy Bennett semutevedzeri wegurukota rezvekurima, nyaya yekusagadzwa kwemagavhuna ematunhu enyika, nyaya yemuchuchisi mukuru wehurumende nedzimwe.
Chipangamazano chemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vanoti vakangomirira kunzwa kubva kuvatatu ava kuti VaZuma votora gwara ripi. Vatungamiri vakawanda muSADC vanonziwo havasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe
Sachigaro weSADC, VaJoseph Kabila, vakatumawo nhumwa yavo kuti inonzwa zviri kuitika munhaurirano idzi, asi hapana chakabuda. Mumiriri weNorway muZimbabwe, VaGunnar Foreland, vakaudzawo nhepfenyuro yeRadio VOP kuti naivowo vari kushushikana nekudya manonoko kwenhaurirano uku.
VaCharles Mangongera vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika. VaMangongera vanoti kusapera kwenhaurirano kunofadza Zanu-PF chete.
Zvichakadaro, vari kumusangano weG15 muIran, uyo wakatanga neMuvhuro, VaMugabe vakashora zvikuru venyika dzekumawirira vachiti dzinoda kutyisidzira nyika diki dzakaita seZimbabwe.
VaMugabe vakashorawo zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe, vachiti vari kuda kuti United Nations ivandudzwe kuitira kuti nyika dzakabudirira dzisarambe dzichidzvinyirira nyika diki. VaMugabe vakaita hurukuro nemukuru weIslamic Revolution of Iran, VaSyyed Ali Khamenei.
VaKhameni vakati kudyidzana kweZimbabwe neIran kwakasimba zvikuru uye vachada kukusimbaradza.
VaMsekiwa Makwanya vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika. VaMakwanya vanoti pane zvinogona kubuda pamuchato weZimbabwe neIran asi nyaya yekuti zvinoitwa muchivande ndiyo inonetsa.